အစ်မကိုမညှာနဲ့ – My Blog
မောင်သက် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေပြီးတော့ အဘွားတို့ ရွာသွားနေခဲ့သည်။ ဒီမှာက လွတ်လပ်တယ် အဘွားတို့ကလဲ ဘာလုပ်လုပ် မဆူမဆဲ သောက်လိုက်စားလိုက် လယ်ထဲယာထဲလိုက်ကူလိုက် နေ့လည်နေ့ခင်းဆို အမျိုးတွေအသိတွေ အိမ်လည်လိုက်နဲ့ တစ်လလောက်တောင်ရှိသွားြပြီ အသိအိမ်က အမကြီးတစ်ယောက်က မသူဇာတဲ့ ဖြူဖြူဖွေး ရေဆေးငါးကြီး မြို့မှာကိုး တန်းထဲကကျောင်းသွားတက်ပြီး ဆယ် တန်း သုံးခါကျနဲ့ ရွာပြန်လာြပြီး အိမ်မှာပဲ အသုပ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ် သူတို့က သာမန်လူတန်းစားပါ ြမြို့မှာကျောင်းနေတာလဲ သူ့အဒေါ်ခေါ်ထားပေးတာတဲ့ ခုတော့ သုံးခါကျလို့ သူဆက်မနေချင်လို့ပြန်လာတယ် ပြောတာပဲ။ ကျတာလဲမပြောနဲ့ ရည်းစားခပ်များများတဲ့ အကိုဝမ်းကွဲပြောတာ နောက်တစ်ယောက်က ဦးလေးခယ်မ မနုနုဝင်း ကျွန်တော့်ထက် ငါးနှစ်လောက်ကြီးတယ် သူကတော့ တောသူပီပီ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်အသားညိုညိုနဲ့ငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေး။
သူလဲ အိမ်မှာ အမကလေးထိန်း ထမင်းဟင်းချက် ဒါပဲ သူက ခြောက်တန်းလေက်ပဲအောင်တာ ရည်းစားထာဖူးလားမထားဖူးလားတော့ မသိ ပြောချင်တာက သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်က်ု ကျွန်တော်အသွားဆုံး လူပျိုပေါက်ဆိုတော့ ဖွန်ကြောင်တာပေါ့ဗျာ သူတို့အမေအမတွေကလဲ ကျွန်တော့်ကို ကလေးထဲကဝငထွက်နေကျဆိုတော့ ကလေးပဲ မောင်နှမတွေပဲဆိုြပြီး လွှှတ်ထားတာ ဒီတော့စိတ်ကြိုက် ဂေါ်ရုံပဲ ဒါပေမယ့် မျက်လုံးပဲအရသာခံရတာပါ လက်တွေ့တော့ မစရဲဘူး သူတို့ကအကြီးတွေလေ ြပြီးတော့မောင်လိုခင်တာလားမသိ သွားစမှ မျကိစိတောင်အရသာမခံရတဲ့အပြင် မိဘတွေပါမျက်နှာပျက်စရာဖြစ်နေမယ် အင်း မသူဇာကတော့ နဲနဲ ရဲတင်းတယ်ဗျ ကျွန်တော့်ကို မထိကလုတ်နဲ့ ဆက်စ် လေးတွေ ပြောတတ်တယ် တနေ့ နေ့လည်ဘက် အသုပ်စားရင်းသွားလည်တယ် “အမ ဘာတွေ အလုပ်ရှုပ်နေတုံး” ပြောရင်း သူ့ရင်ဘတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။
ဝတ်ထားတာ စပန့်အင်္ကျီ ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ လည်ပင်းနဲနဲဟိုက်တာဝတ်ထားတာမှာ ဘရာအနက်ရောင်ဝတ်ထားတာ သူ့နို့ကြီးနှစ်လုံးက အယ်နေတာပဲဗျာ ကျွန်တော်လဲ တတွေးပဲ မြိုချ လိုက်ရတယ် ထမိန်နဲ့ အင်္ကျီက ဝမ်းဆက် စပန့်သားအပျော့ဆိုတော့ ပေါင်တန်ကြီးတွေကလဲ စင်းနေတာပဲဗျာ သူ့တို့ဆိုင်က ခုံပုလေးတွေနဲ့ခင်ဗျ ” ဒီလိုပါပဲ ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နဲ့ မနားရပါဘူး ခုမှ လူရှင်းသွားတာ” ” အဒေါ်တို့ရော မမြင်ပါလား” အေး ဆေးခန်းဘက်သွားကြတယ် ဆရာကြီးအိမ်မှာ အလှူရှိလို့ သွားကူတာ အငယ်ကောင်က မနက်ထဲက သွားဆော့တာလေ မှောင်မှပြန်လာနေကြ ဆော့ရမယ်ဆို ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့” သူတို့က မောင်နှမ သုံးယောက်လေ အလတ်ကောင်က သူများအိမ်မှာ သူရင်းငှားလုပ်တာ ဟိုမှာပဲအိပ်စားပေါ့ အိမ်ကို တခါတလေမှ ပြန်လာတတ်တယ် ” နင်အသုပ်စား မှာလား ” ” မစားတော့ဘူး ရွာမြောက်ပိုင်းသွားမလို့ လမ်းကြုံ ဝင်လာတာ”။
နင်အရေးမကြီးရင် အမကို ဆိုင်စောင့်ပေးပါလား ရေချိုးချင်လို့… ပြောပြီး ထိုင်ရာက ကုန်းအထ သူ့ရဲ့ ဟိုက်နေတဲ့ အင်္ကျ ီက နေ ဖြူဖွေးနေတဲ့ နို့နှစ်လုံးကို လျှပ်တပြက် မြင်လိုက်ရတယ် ဖွေးဥပြီး နို့သီးနှစ်လုံးဆိုတာ ရဲရဲလေးတွေဗျာ အမှန်ပြောရရင် အဲဒီမတိုင်ခင်ထိ သူ့ဟာကို ဒီလိုမမြင်ဘူးသေးဘူး သူ့ဟာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်အပျိုမှ မမြင်ဘူးတာ ကလေးအမေတွေ နို့တိုက်တာတော့ မြင်ဘူးတာပေါ့ တူမှမတူတာနော မြင်ရတာ ခဏဆိုပေမယ့် အောက်ကကောင်ကတော့ ကြွနေပြီ ဘစ်ပါလို့ တော်သေး နို့မို့ ဒုက္ခ ပြီးတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာရှိတဲ့ မီးဖိုပေါ်က ဟင်းချိုအိုးကို သွားမွှေနေတယ် မတ်တပ်ရပ် ကိုယ်တစ်ပိုင်းချိုးထားတော့ ဖင်ကို မခို့တရို့ ကုန်းပြသလို ဖြစ်နေတာ ထမိန်သားကပျော့ပျော့ နဲ့ ဖင်နှစ်ခြမ်းဟတဲ့နေရာမှာ အချိုင့်လေးဖြစ်နေတာများ ပြေးပြေးပြီး နောက်ကနေ ကျုံးဆော်လိုက်ချင်တယ် အောက်ခံဘောင်းဘီတော့ ပါတယ်ထင်တယ်ဗျ။
အရာလေးထင်နေတာတော့တွေ့တယ် အဟောင်းမို့လို့ ချောင်နေတာဖြစ်မယ် ” ရပါတယ် အရေးမကြီးပါဘူး အလုပ်မရှိလို့ အလေလိုက်နေတာ” သူ့နောက်ပိုင်းအလှကို သွားရည်တမြားမြား ခံစားရင်း ပြောလိုက်တယ် အဲ့အချိန် ရုတ်တရက် သူကလှည်အ့ကြည့် သူခိုးလူမိ ဖြစ်ရော ဒါပေမယ့် သူက မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သူ့နေရာကို ပြန်လာထိုင်တယ် နဲနဲတော့ ပြုံးစိစိ ဖြစ်နေသလိုပဲ ကျွန်တော်လဲ ကယောင်ကတမ်းနဲ့ မတ်တပ်ထရပ်တယ် အဲတော့မှ ပိုဆိုးတော့တာပဲ ညီတော်မောင်က ဒေါထန်နေတာ အောက်ခံဘောင်းဘီပါတာတောင် ပုဆိုးမှာ ဖုဖုဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်လို့ သူကမော့ကြည့်ပြီး “အင်း မောင်သက်လဲ မလွယ်ဘူးနော်” ” ဘာဖြစ်လို့လဲ အမရ” မလုံမလဲ ပြောလိုက်တယ် သူက ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ “အားအားယားယား သွားလာသောက်စားနေတာ ပြောတာပါ ဘာတွေမလုံမလဲ ဖြစ်နေတာလဲ ဟင်း ဟင်း” ” သွားသောက်မလို့ မဟုတ်ပါဘူး” “အမလေး မသိခက်မယ်”။
တော်ပြီဗျာ နောက်ဖေးသွား လိုက်အုံး မယ်… ” အင်း အင်း မဟုတ်တာတွေ မလုပ်နဲ့ နော်” “ဘာမှ မလုပ်ဘူးဗျို့ သေးသွားပေါက်မလို့” ပြောပြီး မြန်မြန်ထွက်ခဲ့လိုက်တယ် နို့ိုမို့ သူု ကြပ်တာခံနေရအုံးမယ် အလိုလိုမှ အလိုလိုရယ် မယ်မဟုတ်လား ‘မသူဇာ ငါ့ကို တမင်လုပ်ပြပြီး ဆွဲဆောင်နေလားမသိဘူး ခါတိုင်း မထိတရိ ကလိုတတ်ပေမယ့် အဲလိုတော့ သူ့ပစ္စည်းတွေကို မြင်အောင်ဘယ်တော့မှ မနေဘူး’ သေးပေါက်ရင်းတွေးမိတယ် အင်း တိုက်ဆိုင်တာနေမှာပါ သူအဲလိုလုပ်ပြလဲ ကိုက မစရဲပါ ယောကျ်ားဆိုတော့ ရရင် ဘယ်ငြင်းမတုန်း ဒါပေမယ့် ကို က မိန်းမကျမ်းကျေသူမဟုတ် အထက်တန်းတုန်းက ရည်းစားတာ ထားဖူးတာ လက်ကိုင်တာကလွဲလို့ ဘာမှ မတွေ့ကြုံဖူးဘူး မသူဇာက ကိုယ့်ထက် လေး နှစ်လောက်ကြီးတော့ ပိုဆိုးပေါ့ အဲလိုတွေးရင်း အပေါ့သွားပြီးတော့ အိမ်ရှေ့ ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ် ဟာ… ခုံနိမ့်လေးပေါ်မှာ မသူဇာ ထိုင်နေပုံက။
ရင်ကော့ဖင်ကောက်ထားတာ ကျွန်တော့် ရင်ထဲ ကုလားဘုရားပွဲလှည့်သွားလား အောက်မေ့ရတယ် ခင်ဗျားတို့လဲ ဒီလိုမျိုးထိုင်နေတာ မြင်ဖူးကြမှာပေါ့ ဘယ်လောက် မိုက်လဲဆိုတာ အဲ မသူဇာလို ခါးသေးဖင်ကောက် အိုးကောင်းတဲ့စော်မျိုးကတော့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဗျာ တကယ်တကယ် ကျွန်တော်ဖြင့် ခုထိ မျက်စိထဲကမထွက်သေးဘူး ကျွန်တော် သူ့ရှေ့ ကခုံ ဝင်ထိုင်တော့ “ကဲ ကိုယ်တော် ကြာလိုက်တာ ဘာတွေလုပ်နေလဲ ကျုပ်အိုးကိုလဲ မွှေထားအုံး ဟင်းအိုးပြောတာနော် ပေါက်ကရ တွေးမနေနဲ့ ” ပြောပြီး အိမ်ပေါ်တက်သွားတယ် အိမ်က ၅ ပေလောက်မြင့်တဲ့ တစ်ထပ် သစ်သားအိမ်ဆိုတော့ လှေကား လေးထစ်ပါပဲ ဒါပေမယ့် သူ့ ဖင်ကြီး ကော့ပြီး တက်သွားတာတော့ သေချာမြင်ရတယ်ဗျာ ညီလေးလဲ ငြိမ်ရာက ပြန်ထနေပြီ အင်းညကျရင်တော့ ငါးဦးကော်မတီနဲ့ သေချာပေါက်တွေ့ရတော့မယ်… သူ နောက်ဖေးအိမ်ကို ရေချိုးသွားလို့ မကြာခင်ပဲ အဒေါ်ပြန်ရောက်လာပြီး။
မောင်သက် ရောက်နေတာ ကြာပြီလား “မကြာသေးပါဘူး အမရေချိုးချင်တယ်ဆိုလို့ ဆိုင်စောင့်ပေးနေတာ အဒါ်” “သြော် အေး အေး အဒေါ်လဲ သူရေချိုးလို့ ရအောင်ဆိုပြီး ခဏ ပြန်လာတာ ဟိုမှာ အလုပ်တွေက မပြီးသေးဘူး” ပြောနေတုန်း အသုပ်စားမဲ့သူ နှစ်ယောက်ရောက်လာလို့ အဒေါ်အလုပ်ရှုပ်သွားတယ် အမလဲ ရေချိုးပြီးလို့ အိမ်ပေါ်တက် သူ့ အခန်းမှာ သနပ်ခါးသွေးနေတယ်ထင်တယ် ဧည့်သည်နှစ်ယောက်နဲ့ အဒေါ် ကလဲ ဘယ်တုန်းထဲက မပြောရတဲ့ စကားတွေလဲ မသိဘူးလုပြောနေလိုက်ကြတာ ကျွန်တော်လဲ သွားမယ်ဆို ထိုင်ရာကအထ “မောင်သက်ရေ အစ်မ ကလစ်လေး လာရှာပေးစမ်းပါ” ကော်တာပဲ သူ့ ရဲ့ရင်လျှားထားတဲ့ အလှကို အနီးကပ် စားပွဲထိုင်ရတော့မယ် အတွေးမဆုံးခင် လူက အခန်းထဲ ရောက်နေပြီ သူ့အခန်းက ဆိုင်ခင်းထားတဲ့ နေရာနဲ့ ကပ်ရက် အိမ်ရဲ့ ခြေရင်းဘက် အကျဆုံး သူ့အခန်း ဝင်ထွက်ပေါက်ကနေ နှစ်ပေလောက် အကွာမှာ ဆိုင်ကို မြင်ရတဲ့ ပြတင်းပေါက်ရှိတယ်။
ဒါကြောင့် အပြင်ကနေဆို အခန်းထဲကို မမြင်ရဘူး သူရှာခိုင်းတဲ့နေရာ ရှာလိုက်တော့ သိပ်မရှာရပါဘူး တွေ့တယ် ဒါပေမယ့် နှာဘူးထချင်တာနဲ့ မတွေ့ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဆက်ရှာနေတာ သူကကျောပေးထားတာဆိုတော့ စိတ်ကြိုက်ကြည့်ခွင့် ရနေတာပေါ့ ပုခုံးသားဖြူဖြုဝင်းဝင်းတွေရယ် အိစက်နေတဲ့ ဖင်ကြီးကလဲ အြယ်နေတာပဲဗျာ တစ်ချက်တစ်ချက် ရင်လျှားကိုလျှော့လျှော့ပြီး နို့တွေကို သနပ်ခါးလိမ်းရင် လှစ်ခနဲမြင်ရတာ နဲတာကြီးတွေ မဟုတ်ဘူး အင်္ကျီဝတ်ထားတော့ သိပ်ကြီးတယ်မထင်တာ ခုမှ မှားမှန်းသိတယ် သနပ်ခါးက သွေးလိုက်လိမ်းလိုက်ဆိုတော့ နောက်ကကြည့်ရတာ သူ့ဖင်ကြီးကို တမင်လှုပ်ပြနေသလားထင်ရတယ် ဒီနေ့တော့ တောင်ပဲတောင်နေရပါလား “အမ ဒါလား ပျောက်တဲ့ဟာ” “အေး အေး နင်က မျက်စိတော်တော်လျှင်တာပဲနော်” မျက်နှာက ပြုံးဖြဲဖြဲနဲ့ ကျွန်တော်လဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်နေလိုက်ပြီး သူ့ဘေးနား သေတ္တာပေါ်က စာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။
ဟဲ့… အဲဒါ ကလေး မဖတ်ရဘူး”ကျွန်တော် ကလေးမှ မဟုတ်တာ” “သြော် မင်းက လူကြီးဖြစ်ပြီလား ဒါဆိုရင်တော့ဖတ်ပေါ့” ဒီစာအုပ်တွေက အစ်မဖတ်တာလား? “ငါမဖတ်လို့ ဒီအိမ်မှာ ဘယ်သူဖတ်မတုန်း” အင်း ဟုတ်သား သူ့အမေနဲ့ အဖေက စာမှ သိပ်မတတ်တာ အငယ်ဆုံးကလဲ ခုမှ နှစ်တန်းလားဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ အဲဒီစာအုပ်တွေက ဘာစာအုပ်လို့ထင်လဲ အောစာအုပ်လို့ ထင်နေကြပြီလား… ကောင်းခန်းတွေ လာပါတော့မယ်ဗျာ နဲနဲ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သီးခံဖတ်ပေးကြပါ လေးပေးခဲ့ကြပါအုံးဗျာ ရေးရတာ အားရှိအောင်လို့ သိပ်မစဉ်းစားကြပါနဲ့ ကာမသျှတ္တရကျမ်းနဲ့ ဖိုမ ဆက်ဆံရေး ပါ “အစ်မကလဲ မိန်းကလေးလုပ်နေပြီး ဒါတွေဖတ်တာပဲလား” “ဟဲ့ ဖတ်တော့ဘာဖြစ်တုန်း မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေမှ မဟုတ်တာ ပညာပေး စာအုပ်တွေပဲ” အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော် အဲဒီအချိန်ထိ ဒါမျိုးစာအုပ်ဆိုရင် မဟုတ်တာလို့ပဲ ထင်တာ အဲ့တော့ မသူဇာကို နှာဘူးစာ အုပ်တွေ ဖတ်တယ်ပဲထင်ပြီး စကားပြောရဲတင်းလာတယ်။
တောင်ပြောမြောက်ပြော ပြောရင်းက မသိသလိုနဲ့ “အစ်မ ဟိုကားတွေရော ကြည့်ဖူးလား” “ဘာကားတွေတုန်း” “အပြာကား ပြောတာဗျာ” နင်က ဘာလုပ်မလို့တုန်း နင်ရော ကြည့်ဖူးလား နင်အရင်ပြော နင်ပြောရင် ငါလဲပြောမယ်” “ဟာ ကျွန်တော်က ယောကျ်ားလေးပဲ ကြည့်ဖူးတာပေါ့ဗျ” “အောင်မယ် ကိုယ်တော် ဂုဏ်ဖော်မနေပါနဲ့ ဒီခေတ် မိန်းကလေးတွေလဲ ကိုးဆယ် ရာနှုန်းလောက် ကြည့်ဖူးကြပါတယ်” “အိုက်ထဲ အစ်မပါတယ်ပေါ့” “အေး ငါ အဒေါ့်အိမ်မှာကျောင်းတက်တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာ ခဏခဏ ကြည့်ဖူးပ အစကတော့ ကြည့်ဖူးရုံဆို တို့သူငယ်ချင်း သုံးယောက် ကြည့်ကြတာ နောက်တော့ လူကြီးတွေလစ်တိုင်း ပေါ့ဟာ” ဟား မသူဇာတို့ကတော့ ပွင့်လင်းတယ်ဟေ့ နဲနဲထပ်ဖောပြီး ပါးစပ်အရသာခံအုံးမှ စိတ်ထဲက တွေးလိုက်တယ်”အဲ့ကားတွေ ကြည့်တော့ ဘယ်လိုုနေလဲ” “ဘယ်လိုမှ မနေပါဘူး” “မဖြစ်နိုင်တာဗျာ ကျွန်တော်တို့တောင်”။
ဘာဖြစ်လဲ ပြောပါအုံး နင်တို့ ယောကျ်ားလေးတွေ အကြောင်းသိရအောင် “ကျွန်တော်တို့ တောင် ပါဆို တောင်တာပေါ့ဗျ” မထူးဘူးဆိုပြီး ပြောချလိုက်တယ် “ဘာတောင်တာလဲ” ” အစ်မ တကယ်မသိတာလား” မေးသာမေးတာပါ သူကအတွေ့အကြုံ ရှိမှာပါ ဒီလောက်ရည်းစားများတာ လတ်တလောတော့ ရွာမှာမရှိဘူးလို့ အကိုကပြောတာပဲ “ကဲပါ ထားလိုက်ပါ မသိချင်တော့ပါဘူး” ဟတ်ကော့ကြီးဗျာ ပြောချင်ပါတယ်ဆိုမှ စိတ်ထဲမှာ တွေးလိုက်မိတာ “နင် အတွဲချောင်းဖူးလား မောင်သက်” “မချောင်းဖူးပါဘူူး” “သူများမေးလို့ အစ်မရော ချောင်းဖူးလို့လား” ” ကျောင်းတုန်းကချောင်းဖူးတယ် အတန်းထဲက အတွဲ တွေကို အဲဒါကမှ ဗီဒီယိုထက်ကောင်းတာ” “ခုတောင် အဖော်မရှိလို့ နို့မို့ ကျောင်းထဲမှာ ညည အတွဲတွေ ချိန်းချိန်းတွေ့ နေတာ ချောင်းလို့ ရပါ့” သူတို့ အိမ်ခြေရင်းဘက်မှာ လမ်းပဲခြားပြီး မူလတန်းကျောင်းရှိတယ် ရွာကျောင်းဆိုတော့ ကျောင်းစောင့်လဲမရှိဘူးလေ။
ဟုတ်လား ကျွန်တော်လဲ မချောင်းဘူးတာနဲ့အတော်ပဲ အစ်မသွားချောင်းရင် ကျွန်တော်လဲလိုက်မယ်လေ “တကယ်လိုက်မှာလား နင်ပါရင်တော့သွားမယ် ငါတစ်ယောက်တည်းဆို ကြောက်လို့ ” “ဒါဆို ည ကိုး နာရီခွဲလောက် လာခဲ့ နောက်မကျစေနဲ့နော်” ဟုတ်ကဲ့ပါ “သမီးရေ အမေ အလှူအိမ်ပြန်သွားလိုက်အုံးမယ်” “‘ဒါနဲ့ ညကျ ဦးလေးတို့ အဒေါ်တို့နဲ့ ဖြစ်ပါ့မလား” ” အမေက ဟိုမှာအိပ်မှာ အဖေက နင်မသိတာလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ နားဒီလောက်လေးတာ ပီးတော့သူက နွားခြံစင်အောက်က တဲမှာ အိပ်တာ” ဟုတ်သား သူ့အဖေက တော်တော်နားလေးသည် အော်ပြောတာတောင် ကြားချင်မှ ကြားတာ အငယ်ကောင်ကလဲ အိပ်ရင်ဆင်အော်မနိုး “အင်း ဒါဆို သွားတော့မယ် နောက်ကျနေပြီ အသုပ်လဲ မစားတော့ဘူး” အေး အေး သိပ်သောက်မနေနဲ့အုံး ညကျအိပ်ပျော်နေအုံးမယ် လာရင် ငါ့ခြေရင်းနံရံကို တိုးတိုးပုတ်ပြီးခေါ်နော်” ” အင်းပါ သွားပြီ”။
ကျွန်တော်လဲ ဘော်ဒါတွေနဲ့ ထုံးစံအတိုင်းသောက် ခြောက်နာရီ လောက် အိမ်ပြန် ရေမိုးချိုးထမင်းစားပြီးခဏနှပ် နေ့လည်ကတွေ့ခဲ့တဲ့ မသူဇာနို့တွေဖင်တွေကို စားမြုံ့ ပြန်ပြီး ဂွင်းထုလိုက်သေးတယ် ကောင်းလိုက်တာမပြောနဲ့ တကယ်သာလုပ်ရရင် ဘယ်လိုနေမယ်မသိ အဖိုးနဲ့အဖွားက ရှစ် နာရီလောက်ဆို အိပ်နေကျဆိုတော့ ကိုးခွဲ ခါနီး အိမ်ခြံစည်းရိုးကျော်ထွက်ခဲ့တယ် အရက်သောက်ထားလို့သာ နဲနဲတော့ ကြောက်သလို ရင်တုန်သလိုပဲ ဟုတ်တယ်လေ အပျိုအိမ်ကပ်တာ လူမိရင်မလွယ်ဘူး ယူရင်လဲ ယူ မယူရင်တော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ယူတော့ မယူနိုင်ဘူးဗျ အသက်က ဆယ့်ရှစ် လောက်ရှိသေးတာလေ အလကားရရင်တာ တွယ်ချင်တာ သူတို့အိမ်က ခြံစည်းရိုးမရှိလို့တော်သေး “မသူဇာ မသူဇာ” အိမ်နံရံကို ပုတ်ပြီး လေသံနဲ့ “ငါဆင်းခဲ့မယ် လူရိပ်လူခြေကြည့်ထားအုံး” မကြာဘူး သူဆင်းလာပြီး “နင်ခဏ စောင့်အုံး ငါအပေါ့သွားအုံးမယ်ဆိုပြီး နောက်ဖေးထွက်သွားသည်။
အဲ့အချိန် လမ်းပေါ်လူဖြတ်သွားလို့ ပုန်းလိုက်ရသေး ခဏနေ သူပြန်ရောက်လာတော့ လမ်းကူးပြီး စာသင်ကျောင်းထဲ ဝင် စာသင်ဆောင် အနောက်ဘက်ကို သွား ဘယ်လိုသွားရတယ်မှတ်လဲ သူကရှေ့ က ကျွန်တော်ကနောက်က လေးဘက်ထောက်သွားရတာ ခင်ဗျားတို့သာ စဉ်းစားကြည့် လမသာတသာလေးမှာ စွံ့ကားဖွင့်ထွားတဲ့ ဖင်ကြီးကိုနောက်ကိုပစ် ခါးကော့ပြီး သွားတော့ တကယ့် ဒေါ်ဂီ စတိုင် ပါပဲဗျာ ညဘက်ဆိုပြီး ဘစ်ဝတ်မလာမိတော့ ကျွန်တော့်ကောင်က ဘာပြောကောင်းမလဲ ဒေါသတရှူးရှူးနဲ့ တင်းမာထောင်ပြန်နေပြီပေါ့ဗျာ ” ရှူး တိုးတိုး ဟိုရှေ့ က စက္ကူပန်းခြုံနှစ်ခုကြားမှာ ကြည့် ” ကျွန်တော်တို့ နံရံအကွယ်ကနေ အသာခေါင်းပြူ ချောင်းရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတယ် ကစ်စင်ဆွဲကြနေကြတာ ဘဲလက်တစ်ဘက်ကလဲ စော်ထမိန်ထဲမှာ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ကလိုင်းနေတယ်ထင်တယ် ခဏနေတော့ ခေါင်းချင်းခွာပြီး ဘဲက စော် အင်္ကျီမချွတ်ပြီး နို့နှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့နေတယ်။
ကျွန်တော်လဲ အသက်တောင်မရှူနိုင်လောက်အောင်ပဲ တံတွေးတွေလဲ ခဏခဏမြိုချနေမိတယ် မသူဇာက စောင့်ကြောင့်ထိုင် ကျွန်တော်က သူ့ နောက်ကနေ ကားယားခွ ကိုယ်တဝက်ကုန်းပြီးချောင်းတာဆိုတော့ ကို့ငပဲကလဲ သူ့နောက်ကျောကိုတော့ သွားသွားထောက်မိနေတယ် သူကလဲရှေ့ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားလို့ သတိမထားမိတာလား တမင်မသိချင်ယောင်ဆောင်တာလားဆိုတာတော့ မသိဘူး ကျွန်တော်လဲ ဒီအခြေနေမှာတော့…. သူလဲကို့လိုပဲနေမှာပဲဆိုပြီး တိုးတိုးထောက်တယ် နောက်ကျောနဲ့တောင်ပြီးချင်သလိုဖြစ်နေပြီ “အစ်မ သူတို့ ဘာလုပ်နေကြတာလဲ” “နင်မြင်ရဲ့သားနဲ့ ငါ့လာမေးမနေနဲ့ တိုးတိုးနေ ကြားသွားလို့ ထပြန်သွားမှ မကြည့်ရဖြစ်နေမယ် နင်ပဲ မြင်ဖူးချင်တယ်ဆို “အင်း အင်း” ပြောနေတုန်းပဲ ကောင်မလေးက ဇွတ်ကုန်းရုန်းထပြီး ထမိန်တွေ အင်္ကျ ီတွေ ပြန်ပြင်ဝတ်နေတယ် ဘဲကလဲ အောက်မှာ ကြက်ကြီးလည်လိမ်ထားသလိုပဲ ခဏနေတော့ သူတို့ ထွက်သွားကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့လဲ နောက်ခြုံတွေရှာပေမယ့် ဘယ်သူမှမရှိတော့ပါဘူး ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲလား မသိ “အစ်မ ဘာဖြစ်သွားကြတာလဲ” “ကောင်မလေးက လက်မခံလို့နေမှာပေါ့ ” ခုဏက အတွဲထိုင်သွားတဲ့ နေရာမှာ ခဏထိုင်ရင်းမေးလိုက်တယ် ကျွန်တော်လဲ သူ ကိုယ့် ပစ္စည်းမြင်ရင်မြင်ပါစေဆိုပြီး ပုဆိုးထဲမှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့ လီးအတောင်ရက်သားကြီးနဲ့ တင်ပျဉ်ခွေထိုင်လိုက်တယ် သူက ကျွန်တော့ရှေ့မှာ ဆောင့်ကြောင့်လေး အမူးလေးကလဲ မပြေသေးတော့ သတ္တိလေးလဲရှိ သူ့ကိုမှ မ-ိုးရရင် မပြန်ဘူးကွာ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီး “အတွဲမရှိရင် ကိုယ့်ဟာကိုပဲ အတွဲလုပ်ရအောင်အစ်မ” “အံမယ် နင်ကဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲ ပြောစမ်းပါအုံး” “ခုဏက အတွဲလို လုပ်မယ်လေ” ပြောရင်း သူဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ ပေါင်ကြားကို လက်ညှိုးနဲ့ နှိုက်လိုက်တော့ သူ ဖင်လေးဆတ်ကနဲကော့သွားပြီး ကျွန်တော့လက်ကို ဆွဲတယ် ဟာ… အောက်ခံဘောင်းဘီမပါဘူး ဗျာ ထမိန်ကလဲ အထူသားမဟုတ်လို့ထင်တယ်။
လက်မှာတောင်နွေးကနဲ နဲ့ စိုတိုတိုလေး “နင်ကဘာလို့ အဲလိုလုပ်ချင်တာလဲ” မသိဘူး အစ်မရာ ခုကျွန်တော် အစ်မကို တအား-ိုးချင်နေတာပဲသိတယ် အစ်မရော ဟိုအတွဲကိုကြည့်ပြီး အ-ိုးခံချင်စိတ်မပေါ်ဘူးလား ကဲ ပြော” ဆိုပစ်ပစ်နှစ်နှစ်ပြောပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ကို ထပ်နှိုက်လိုက်တော့ “နေအုံး ပြီးမှလုပ် ငါပြောတာ အရင်နားထောင် နင်ဒီကိစ္စကို ဘယ်သူ့မှ လျှောက်မပြောရဘူးနော်” “အင်းပါ အစ်မကလဲ ကိုယ့်စားပေါက်ကို ပိတ်အောင်လုပ်ပါ့မလား ခိုးစားပါတယ်ဆို ကဲ ပြောဗျာ အစ်မရော မခံချင်ဘူးလား လို့မေးထားတယ်လေ” “အေးပါ ငါလဲ ခံချင်ပါတယ်” သူ့စကားတောင် မဆုံးသေးဘူး နှုတ်ခမ်းကို ဆွဲစုပ်ပစ်လိုက်တယ် လက်ကလဲ ထမိန်အတွင်းထဲကနေ သူ့စောက်ဖုတ်ကို လက်ခလယ်နဲ့ ထိုးထိုးကော် လက်မနဲ့ စောက်စိကိုကလိပေးလိုက်တယ် အရည်တွေကတော့ ဟိုအတွဲကို ချောင်းကတည်းက တော်တော်ထွက်နေပြီးသားဆိုတော့ စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးတင်မကဘူး ဖင်ကြားထဲပါ ယိုနေပြီ။
အဲ ပြောရအုံးမယ် ကျုပ်ကစော် အမှန်အကန်သာ မဖိုက်ဖူးတာ ဖာတော့ သုံးလေးခါ ချဖူးတယ် ပီးတော့ ကိုယ့်အကိုတွေဆီကလဲ ဒီပညာတွေ ကြားဖူးနားဝရှိပီးသားဆိုတော့ နဲနဲတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ “အစ်မ လုပ်ရအောင်ဗျာ” “နင့် ပုဆိုးခင်းလိုက် ငါ့နောက်ကျော မြက်တွေနဲ့ ယားမှာစိုးလို့ ” ဘာရမလဲ ဒါမျိုးတော့ဘယ်နှေးမလဲ ပုဆိုးကို ခေါင်းကကျော်ချွတ် အောက်မှာဖြန့်ခင်းလိုက်တယ် ပီးတာနဲ့ သူကလဲ မနှေးပါဘူး ပုဆိုးပေါ် ဒူးထောင်ရက်ပက်လက်ကလေးဝင်အိပ်ရော ကျွန်တော်လဲ သူ့ပေါင်နှစ်လုံးကြား ဒူးထောက်ဝင် ထမိန်လေးကို အသာပဲ သူ့ခါးပေါ်တွန်းချလိုက်တယ် လရောင်ကြိုးတိုကြဲတဲမှာ အောက်ငုံ့ကြည့်တော့ အဖုတ်က အမွှေးရိတ်ထားတာ ပြောင်ရှင်းနေတာပဲဗျာ နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကလဲ စိပီး ဖောင်းကြွနေတာများ ကိုက်စားချင်စရာ အဲဒီအပေါ်က အစိလေးကလဲ ထောင်လို့ “ဟဲ့ ဘာကြည့်နေတာလဲ ပြောတော့ လုပ်ချင်လှပီဆို ထည့်တော့လေ” အစ်မ ကျွန်တော့ ဟာကိုင်ထည့်ပေး”။
လူလည်ကျလိုက်တယ် သူလဲ ဘာမှ မပြောပဲ မျက်စောင်းထိုးပီး ” ရှေ့နဲနဲတိုး ကိုယ်တော် ” ပြောပီး ကျွန်တော့်ဟာကိုင်လိုက်တော့ ” ဟယ် နင့်ဟာကမသေးပါလဲ ဟင်း လူကသာငယ်တယ် ဖြည်းဖြည်းသွင်းနော် အရမ်းမလုပ်နဲ့အုံး ငါ့ ဟာလေး ကွဲသွားအုံးမယ် အင်းပါ အစ်မရဲ့” ဒစ်ထိပ်ဖူးနဲ့ သူ့အဖုတ်နှုတ်ခမ်သား နှစ်ခုကြား သုံးလေးချက် အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲတော့ လူတောင်တွန့်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်ပီး ပီးချင်သလိုလို ဖြစ်သွားလို့ ကိုယ့်နသယ်မွှေးကို စောင့်ဆွဲလိုက်ရတယ် အဲလို ဆွဲပီးမှ အပေါက်ဝမှာတေ့ပေး တော့ ကျွန်တောလဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းသွင်းတယ် ထစ်ထစ်နဲ့ စီးပိုင်နေတာပဲဗျာ တဝက်လောက်ရောက်တော့ ” အား နဲနဲနာတယ်” ” ဒါဆိုဆက်မသွင်းသေးပဲ ဒီနားတင် ညှောင့်နေလိုက်ရအုံးမလား” ” ရတော့ရပါတယ် သွင်းပါ” ကျွန်တော်လဲ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လေးလုပ်နေရင်း ခနနေတော့ အရည်တွေနဲ့ ချောလာမှ ဆတ်ကနဲ ဆောင့်ထည့်လိုက်တော့ ။
ဒုတ်…အောင်မလေး သေပါပီဟယ် မောင်သက်ကလဲ အရမ်း ဆောင့်ရလား” “ဘာဖြစ်လို့လဲအစ်မ မကောင်းဘူးလား” “ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့်နာသွားလို့ ” “အဆုံးထိ ဝင်လား” ” အင်း ” ” ကျွန်တော် တစ်ချက်ချင်း ဖြည်းဖြည်းလေး လုပ်ပေးမယ် အစ်မခံနိုင်ပီဆိုတော့မှ တအားဆောင့်မယ်” ” အင်း ” ကျွန်တော်လဲ သူ့ ဒူးကောက်ခွက်နှစ်ခုကို ဗိုက်ပေါ်တွန်းတင်လိုက်ပီး မှန်မှန်လေး -ိုးနေရင်း အကျၤ ီနဲ့ ဘရာလှန် နို့နှစ်လုံး ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့လိုက် နို့သီးလေးတွေကိုချေလိုက်လုပ်တော့ မသူဇာလဲ တဟင်းဟင်းနဲ့ ဖီးတက်လာတယ် ” မောင်လေး ဆောင့်-ိုးတော့ အစ်မခံနိုင်ပီ” ဒီတော့မှ ကျွန်တောလဲ သူ့ဖင်ကြီး အပေါ်ကြွတက်လာတဲ့အထိ သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သူ့ခေါင်းနားလောက်ထိ လာက်ထိ ရောက်အောင်တွန်း ကိုယ်က ဆောင့်ကြောင့်အနေအထားနဲ့ တဖုန်းဖုန်းနဲ့ ဆောင့်-ိုးတော့တာပဲ ” အား အား မောင်လေး အရမ်းကောင်းတယ် နို့လဲစို့ပေးအုံး အစ်မကို မညှာနဲ့နော် အသားကုန်ဆောင့်”။
အင်း အင်း စိတ်ချအစ်မ ကျွန်တော်လဲ အရမ်းကောင်းနေပီ နှစ်ယောက်သား နှုတ်ခမ်းချင်းစုတ်လိုက် သူကလဲ ကိုယ့်လည်ပင်းဖက်ပီး အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးလိုက် နဲ့ အပေးအယူမျှနေကြတယ် အပေါ်ကနေ စကောဝိုင်းလိုဝိုင်းပီး မွှေပေးတော့ ” ထိတယ်မောင်သက်ရယ် နင်လဲ တော်တော်တတ်တယ်နော် ဟင်း ဟင်း ” ဖီးတက်နေတဲ့အသံကြီးနဲ့။ ခနကြာရင်ပဲ ” ဆောင့် ဆောင့် အစ်မ ပီးတော့မယ် ” ဆိုပီး သူ့ ဒူးကောက်ခွက်နှစ်ခုကို သူဆွဲပေးထားတယ် ကျွန်တော်လဲ သူ့နို့နှစ်လုံးကို စုံဆွဲ အချက်နှစ်ဆယ်လောက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖိဆောင့်ပစ်လိုက်တာ သူ့စောက်ဖုတ် ထဲက ကျွန်တော့လီးကို ရှု့ပွရှု့ပွနဲ့ ဆွဲစုတ်သလိုဖြစ်လာ သူလဲ အံကြိတ်ပီး တဟင်းဟင်းနဲ့ ကော့ကော့တက်သွားတော့မှ ကျွန်တော်လဲ နောက်ဆုံးသုံးလေးချက် တဆုံးဆောင့်-ိုးပီး အဖုတ်ထဲကို သုတ်ရည်တွေပန်းထုတ်ရင်း နှစ်ယောက်အတူတူ ပီးလိုက်ကြတယ်။
ကျွန်တော်လဲ သူ့ရင်ဘတ်ပေါ် မှောက်အိပ်ပီး နို့လေးကိုင်လိုက် အသီးလေးစို့လိုက်နဲ့ အဖုတ်ထဲ လီးတပ်ရက်နဲ့ ဇိမ်ယူပီး ခနကြာတော့ ” မောင်လေး ထ တော့ သိပ်ဇိမ်လုပ်နေနဲ့ သွားရအောင်” ဆိုတော့ “ဟာ အမ ကလဲ နေပါအုံး နောက်တစ်ခေါက်လေ” ” နောက်နေ့မှ လာ ခုတော့ သွားရအောင် တော်ကြာ နင့်အိမ်က လူကြီးတွေ နင်မရှိတာ သိသွားအုံးမယ်” ” အင်း ဟုတ်တယ် အဘိုးက တရေးနိုး အိမ်အောက်ထပ်ရေဆင်းသောက်တတ်တယ် သွားမယ်လေဒါဆိုလဲ နောက်နေ့ရော လာရမှာလား ခုတောင် မဝသေးဘူး အစ်မရာ” “အေးပါ အခြေနေ ပေးရင်ပေးသလိုပေါ့ နင်လဲ နှာဘူးလေးပဲနော် ဟင်း ဟင်း” “ဒါဆို အစ်မက အ-ိုးခံရတာ မကြိုက်ဘူးပေါ့” “ဟယ် မိုက်ရိုင်းတယ် ကြည့်စမ်း” ပြုံးစိစိနဲ့ “ဟုတ်တယ်လေ ခုနက ကောင်းတုန်းကရုပ်တစ်မျိုး” ” အေးပါအေးပါ ကြိုက်ပါတယ် ကြိုက်လို့ ခံတာပေါ့ ဒီဟာကြီးကို ပိုတောင်ကြိုက်သွားသေး ဟင်း” ဆိုပြီး မျက်စောင်းထိုးလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ အဝတ်တွေဝတ် ကျောင်းထဲက ပြန်ထွက် အိမ်ကို ပြန်ခဲ့ ကြတယ် အတွေးထဲမှာတော့ နောက်နေ့ အခွင့်အရေး ရပါ့မလားပေါ့ နောက်နေ့ မနက်အိပ်ရာကနိုးတော့ အဖိုးခိုင်းတာလုပ် ဆယ့်တစ် နာရီလောက်ထမင်းစားပီး ရွာမြောက်ပိုင်းထွက်ခဲ့တယ် လမ်းမှာ ညဘက်အခြေနေ သိရအောင် မသူဲဇာတို့ အိမ်ဝင်မေးတော့ ” ဒီညတော့ မရလောက်ဘူး အမေ ဘယ်မှမသွားဘူးဟ ခုတော့ ဟိုဘက်ရွာ သွားတယ်” ‘ဒါဆို အတော်ပဲပေါ့ ” “ဘာအတော်ပဲလဲ နေ့ဘက်တော့ မရဘူး ဆရာ အရှက်ကွဲနေမယ် ပီးတော့ ကျွန်မ ယောကျၤားမယူချင်သေးဘူး” “အံမယ် ကျွန်တော်လဲ မယူချင်သေးပါဘူး ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတာ” ” အေးပါ နင့်အတွက်လဲ ပြောနေတာပေါ့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကြာကြာဝါးမဲ့သွာ ဘာစားစား အရိုးကြည့်ရှောင်ပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား” ပြုံးစိစိ ပြောပီး အိမ်ပေါ်တက်သွားတယ် ကျွန်တော်လဲ နောက်က လိုက်တက်သွားတော့ သူက “ဘာလိုက်လုပ်အုံးမလို့လဲ ” “ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး” လို့ ပြောလိုက်ပေမဲ့။
သူ့ အခန်းထဲလဲ ရောက်ရော နောက်ကချိုင်းအောက်ကသိုင်းဖက်ပီး သူ့ဂုတ်သားလေးကို ဖွဖွနမ်း သွားလေးနဲ့ ကိုက်လို့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆွဲညစ်လိုက်တော့ “မောင်သက်ရယ် မလုပ်ပါနဲ့ဆိုဟာ” “အင်းပါ အစ်မရဲ့ ဒါပေမဲ့ ညက သေချာမမြင်ရလို့ အစ်မ အဖုတ်ကိုတော့ ပြပါဗျာ နို့မို့ဆိုရင်တော့ လုပ်မှာပဲ ဘာဖြစ်ဖြစ်” “တော်တော်ခက်တဲ့ ကောင်လေး” ဆိုပီး သေတ္တာပေါ် ထိုင်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းတင် ထမိန်ကိုလှန်ပီး ဟပြတယ် လှလိုက်တဲ့ အဖုတ်ဗျာ တစ်ခါမှ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သေချာမမြင်ဘူးလို့လား မသိဘူး အမွှေးရိတ်ထားတာ ပြောင်ရှင်း သပ်ရပ်ပီး အမည်းစက်တစ်ခုတောင်မရှိဘူး နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုက ဖားခုံးညှင်းကြီးလို ဖောင်းကြွပီး အကွဲကြောင်းလေးက စိနေတယ် ဗမာမဆိုတော့ နှုတ်ခမ်းသားကနဲနဲညိုတာပေါ့ အစိလေးကတော့ ယောကျၤားတစ်ယောက်က စိမ်ပြေနပြေကြည့်နေလို့လားမသိ နဲနဲတောင် ထောင်ပီးကြီးနေသလိုပဲ အနံ့လေးကလဲ တစ်မျိုးပဲဗျာ ငပိရည်နံ့ ပျော့ပျော့ သင်းနေသလိုပဲ။
ခုထက်ထိတောင် အဲဒီအနံ့ကို ရနေသလို ခံစားရတယ် အောက်ကကောင်ကလဲ မာနေပီ “တော်တော့မောင်သက်ရယ် နောက်မှ သေချာကြည့်တော့ အငယ်ကောင်ပြန်လာတော့မယ်” “အစ်မရေ ဗိုက်ဆာပီဗျို့ ထမင်းစားမယ်” “အေးအေး ခဏလေး ငါထမင်းခူးခဲ့မယ် အောက်ကစောင့်” ထသွားပီး သူထမင်းခူးနေတုန်း ကျွန်တော်လဲ အောက်ဆင်းခဲ့လိုက်တယ် “ကိုမောင်သက်ကြီး ရောက်နေတာလား အစ်မက ဘာတွေခိုင်းနေပြန်ပီလဲ” “သူ့အောက်စက် ကြည့်ပေးနေတာပါကွာ” “ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ” “ထစ်ထစ်နေလို့တဲ့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးထင်ပါတယ် မကောင်းတဲ့ ခွေတွေ ထိုးထိုးကြည့်လို့နေမှပါ” “ဟုတ်မှာဗျ သူက သူများဆီက အလကားရတာပဲ ငှားငှားကြည့်တာကိုး” “ခွေးလေး ဘာမှမသိဘဲ လျှောက်ပြောနေပြန်ပီ” ကျွန်တော့်ကို မျက်စောင်းထိုးရင်း “အေး သွားပီ မင်းအစ်မကို နောက်ဆို ကောင်းတဲ့ ဟာပဲထိုးကြည့်ခိုင်းဟေ့” ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်လည်း မြို့ပြန်တာနဲ့ ဘာနဲ့ နှစ်ပတ်လောက်ကြာသွားတယ်။
ရွာပြန်ရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း မသူဇာတို့အိမ်ဘက် ခြေဦးလှည့်တာပေါ့ “မောင်သက် နင်ပြန်ရောက်ပီလား ငါလည်းနင့်ကို မျှော်နေတာ” “ဘာလို့လဲ အဒေါ်တို့ မရှိဘူးလား ဒါဆိုရင်တော့ ပွတာပဲ” “အေးပါ မနေ့ကပဲ မြို့ ကအမျိုးတွေဆီ အလည်သွားတယ် ဆယ်ရက်လောက်ကြာမယ်တဲ့ အကြီးကောင်ပါ ပါသွားတယ်” “ဟာ ပိုကောင်းတာပေါ့ နို့မို့ ညဘက် သူပြန်လာမှာ ကြောက်နေရအုံးမယ် ခုတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ” ” အေး နင်ညကျ ၈ နာရီလောက်လာခဲ့လေ အငယ်ကောင်လဲ အဲ့အချိန်လောက်ဆို အိပ်နေပါပြီ” ” ဟုတ် ဟုတ်” ဆိုပီး ကျွန်တော ်လည်း ဘော ်ဒါတွေဆီ ထွက်ခဲ့တယ် ညနေလောက်ကျအိမ်ပြန် အဖိုးနဲ့အဖွားကို သူငယ်ချင်းအိမ် အိပ်မယ်ပြောပြီး ၈ နာရီလောက်ထွက်ခဲ့တယ် သူတို့အိမ်ရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း နံရံကိုပုတ်လိုက်တော့ သူအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာပြီး ” အမ ကျောင်းထဲသွားမှာလား” ” မသွားတော့ဘူးလေ အဖေမှမရှိတာ ဟိုကောင်လေးလည်းအိပ်နေပီဆိုတော့ အဖေ့တဲထဲ သွားရအောင်” “ကောင်းတာပေါ့ ဒူးမနာတော့ဘူး ဟီးဟီး ” ဒါနဲ့ အိမ်ခေါင်းရင်းဘက်က သူ့အဖေတဲထဲ ရောက်တော့ “ဟာ မှောင်မဲနေတာ ဘာမှလည်းမမြင်ရဘူး” “ငါ ဖယောင်းတိုင်ယူခဲ့ပါတယ်ဟ” ပြောပီး မီးထွန်းလိုက်တယ် အထဲမှာတော့ တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ဆိုပေမဲ့ နှစ်ယောက် အတူ…….ပြီးပါပြီ။
တီ… တီ…အိမ်ရှေ့မှကားဟွန်းသံ ပေါ်လာသည်။ မှန်ရိပ်တွင်ပေါ်လာသော သူမ၏မျက်နှာကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။ ပြီး တော့ အင်္ကျီလဲရန်ဘီရိုဆီသို့ထ၍လာသည်။ “နီနီ … အဝတ်လဲနေတာ ကြာလှပြီ …” အန်ကယ်၏ အသံကရှေ့ခန်းမှ ပေါ်လာသည်။ ပြီးခြေနင်းသံကိုကြားရသည်။ အန်ကယ်ဆိုတာက နီနီပထွေး … အသက်က သုံးဆယ် လောက်သာရှိသေးသည်။ နီနီ မေမေက လေးဆယ် ထဲရောက်နေပြီး သူမ၏ယောင်္ကျား နီနီ၏ပထွေး ကိုတင့်အောင်ကို နီနီ အန်ကယ်ဟုခေါ်ရန်မေမေက သင်ထားသည်။ နီနီ၏ အသက်က နှစ်ဆယ် ကျော် နှစ်ဆယ့်တစ် ထဲရောက်နေချေပြီ။ မေမေနှင့်ကိုတင်အောင်တို့ယူလိုက်ကြသည်က ဘာမျှမကြာသေး လေးငါးလလောက်သာရှိ သေးသည်။ ဖေဖေဆုံးသွားသည်က ငါးနှစ်မျှရှိပြီဖြစ်သည်။ မေမေနောက်အိမ်ထောင်ပြုတော့မည်ဆိုတော့ အသက် လေးဆယ်ထဲ ရောက်နေပေမဲ့ နုပျိုဆဲလှပဆဲ မေမေ့ကို နီနီ အရမ်းသမျှောသည်။ မျက်ရည်လည်ရွဲနှင့် […]
ယနေ့ချိန်ထိ နုပျိုလှပကာ ပရိသတ်တွေ ချစ်မဝ ဖြစ်နေသူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး နန္ဒာလှိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာတော့ သမီးလေးတွေအတွက် မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် နေထိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူမရဲ့ သမီးလေးသုံးယောက်ကိုပါ ချစ်မဝ ဖြစ်နေကြတာပါ။ နန္ဒာဟာ မိသားစုအပေါ်မှာလည်း တာဝန်ကျေပွန်လွန်းတဲ့ သမီးအလိမ္မာလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ မွေးချင်းခြောက်ယောက်ထဲတွင် ဒုတိယမြောက် သမီးချောလေး ဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာရဲ့ မိသားစုလေးကလည်း စည်းစည်းလုံးလုံးရှိလှပြီး မြင်ရသူတိုင်း ကြည်နူးအားကျစေတာလည်း အသေချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညကလည်း နန္ဒာရဲ့ ခင်ပွန်း ဇေသီဟရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ပုံလေးတစ်ပုံ တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ညီမလေးတွေကို အမကြီးအမိရာဆိုတဲ့အတိုင်း ဂရုတစိုက်နဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးပဲ […]
ေမာင္သက္ ဆယ္တန္းစာေမးပဲြေျဖၿပီးတော့ အဘြားတို႔ ႐ြာသြားေနခဲ့သည္။ ဒီမွာက လြတ္လပ္တယ္ အဘြားတို႔ကလဲ ဘာလုပ္လုပ္ မဆူမဆဲ ေသာက္လိုက္စားလိုက္ လယ္ထဲယာထဲလိုက္ကူလိုက္ ေန႔လည္ေန႔ခင္းဆို အမ်ဳိးေတြအသိေတြ အိမ္လည္လိုက္နဲ႔ တစ္လေလာက္ေတာင္ရွိသြားျၿပီ အသိအိမ္က အမႀကီးတစ္ေယာက္က မသူဇာတဲ့ ျဖဴျဖဴေဖြး ေရေဆးငါးႀကီး ၿမိဳ႕မွာကိုး တန္းထဲကေက်ာင္းသြားတက္ၿပီး ဆယ္ တန္း သံုးခါက်နဲ႔ ႐ြာျပန္လာျၿပီး အိ္မ္မွာပဲ အသုပ္ဆိုင္ဖြင့္ထားတယ္ သူတို႔က သာမန္လူတန္းစားပါ ျၿမိဳ႕မွာကေ်ာင္းေနတာလဲ သူ႔အေဒၚေခၚထားေပးတာတဲ့ ခုေတာ့ သံုးခါက်လို႔ သူဆက္မေနခ်င္လို႔ျပန္လာတယ္ ေျပာတာပဲ။ က်တာလဲမေျပာနဲ႔ ရည္းစားခပ္မ်ားမ်ားတဲ့ အကိုဝမ္းကဲြေျပာတာ ေနာက္တစ္ေယာက္က ဦးေလးခယ္မ မႏုႏု၀င္း ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ငါးနွစ္ေလာက္ႀကီးတယ္ သူကေတာ့ ေတာသူပီပီ က်စ္က်စ္လစ္လစ္အသားညိဳညိဳနဲ႔ငါးရံ႕ကိုယ္လံုးေလး။
သူလဲ အိမ္မွာ အမကေလးထိန္း ထမင္းဟင္းခ်က္ ဒါပဲ သူက ေျခာက္တန္းေလက္ပဲေအာင္တာ ရည္းစားထာဖူးလားမထားဖူးလားေတာ့ မသိ ေျပာခ်င္တာက သူတို႔နွစ္ေယာက္အိမ္က္ု ကြၽန္ေတာ္အသြားဆံုး လူပ်ိဳေပါက္ဆိုေတာ့ ဖြန္ေၾကာင္တာေပါ့ဗ်ာ သူတို႔အေမအမေတြကလဲ ကြၽန္ေတာ့္ကို ကေလးထဲကဝငထြက္ေနက်ဆိုေတာ့ ကေလးပဲ ေမာင္ႏွမေတြပဲဆိုျၿပီး လႊွတ္ထားတာ ဒီေတာ့စိတ္ႀကိဳက္ ေဂၚရံုပဲ ဒါေပမယ့္ မ်က္လံုးပဲအရသာခံရတာပါ လက္ေတြ႕ေတာ့ မစရဲဘူး သူတို႔ကအႀကီးေတြေလ ျၿပီးတော့ေမာင္လိုခင္တာလားမသ္ိ သြားစမွ မ်ကိစိေတာင္အရသာမခံရတဲ့အျပင္ မိဘေတြပါမ်က္နွာပ်က္စရာျဖစ္ေနမယ္ အင္း မသူဇာကေတာ့ နဲနဲ ရဲတင္းတယ္ဗ် ကြၽန္ေတာ့္ကို မထိကလုတ္နဲ႔ ဆက္စ္ ေလးေတြ ေျပာတတ္တယ္ တေန႔ ေန႔လည္ဘက္ အသုပ္စားရင္းသြားလည္တယ္ “အမ ဘာေတြ အလုပ္ရႈပ္ေနတံုး” ေျပာရင္း သူ႔ရင္ဘတ္ကိုၾကည့္လိုက္တယ္။
ကြ်န္ေတာ္လဲ ေဘာ္ဒါေတြနဲ႔ ထံုးစံအတိုင္းေသာက္ ေျခာက္နာရီ ေလာက္ အိမ္ျပန္ ေရမိုးခ်ဳိးထမင္းစားျပီးခဏႏွပ္ ေန႔လည္ကေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ မသူဇာနုိ႔ေတြဖင္ေတြကို စားၿမံဳ႕ ျပန္ၿပီး ဂြင္းထုလိုက္ေသးတယ္ ေကာင္းလုိက္တာမေျပာနဲ႔ တကယ္သာလုပ္ရရင္ ဘယ္လိုေနမယ္မသိ အဖိုးနဲ႔အဖြားက ရွစ္ နာရီေလာက္ဆို အိပ္ေနက်ဆိုေတာ႔ ကိုးခြဲ ခါနီး အိမ္ၿခံစည္းရိုးေက်ာ္ထြက္ခဲ႔တယ္ အရက္ေသာက္ထားလို႔သာ နဲနဲေတာ႔ ေၾကာက္သလို ရင္တုန္သလိုပဲ ဟုတ္တယ္ေလ အပ်ဳိအိမ္ကပ္တာ လူမိရင္မလြယ္ဘူး ယူရင္လဲ ယူ မယူရင္ေတာ႔ သိတဲ႔အတိုင္းပဲ ယူေတာ႔ မယူနိုင္ဘူးဗ် အသက္က ဆယ့္ရွစ္ ေလာက္ရွိေသးတာေလ အလကားရရင္တာ တြယ္ခ်င္တာ သူတို႔အိမ္က ၿခံစညး္ရိုးမရွိလို႔ေတာ္ေသး “မသူဇာ မသူဇာ” အိမ္နံရံကို ပုတ္ၿပီး ေလသံနဲ႔ “ငါဆင္းခဲ့မယ္ လူရိပ္လူေျခၾကည္႔ထားအံုး” မၾကာဘူး သူဆင္းလာၿပီး “နင္ခဏ ေစာင္႔အံုး ငါအေပါ႔သြားအံုးမယ္ဆိုၿပီး ေနာက္ေဖးထြက္သြားသည္။
ျပီးေတာ႔ အ၀တ္ေတြ၀တ္ ေက်ာင္းထဲက ျပန္ထြက္ အိမ္ကို ျပန္ခဲ႔ ၾကတယ္ အေတြးထဲမွာေတာ႔ ေနာက္ေန႕ အခြင့္အေရး ရပါ႔မလားေပါ႔ ေနာက္ေန႔ မနက္အိပ္ရာကနိုးေတာ႔ အဖိုးခိုင္းတာလုပ္ ဆယ့္တစ္ နာရီေလာက္ထမင္းစားပီး ရြာေျမာက္ပိုင္းထြက္ခဲ့တယ္ လမ္းမွာ ညဘက္အေျခေန သိရေအာင္ မသူဲဲဇာတို႔ အိမ္၀င္ေမးေတာ႔ ” ဒီညေတာ႔ မရေလာက္ဘူး အေမ ဘယ္မွမသြားဘူးဟ ခုေတာ႔ ဟိုဘက္ရြာ သြားတယ္” ‘ဒါဆို အေတာ္ပဲေပါ႔ ” “ဘာအေတာ္ပဲလဲ ေန႔ဘက္ေတာ႔ မရဘူး ဆရာ အရွက္ကဲြေနမယ္ ပီးေတာ႔ ကြ်န္မ ေယာက်ၤားမယူခ်င္ေသးဘူး” “အံမယ္ ကြ်န္ေတာ္လဲ မယူခ်င္ေသးပါဘူး ငယ္ငယ္ေလး ရွိေသးတာ” ” ေအးပါ နင္႔အတြက္လဲ ေျပာေနတာေပါ႔ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ၾကာၾကာ၀ါးမဲ့သြာ ဘာစားစား အရိုးၾကည္႔ေရွာင္ေပါ႔ ဟုတ္ဘူးလား” ၿပံဳးစိစိ ေျပာပီး အိမ္ေပၚတက္သြားတယ္ ကၽြန္ေတာ္လဲ ေနာက္က လိုက္တက္သြားေတာ႔ သူက “ဘာလိုက္လုပ္အံုးမလို႔လဲ ” “ဘာမွ မလုပ္ပါဘူး” လို႔ ေျပာလိုက္ေပမဲ့။
တီ… တီ…အိမ္ေရွ႕မွကားဟြန္းသံ ေပၚလာသည္။ မွန္ရိပ္တြင္ေပၚလာေသာ သူမ၏မ်က္ႏွာကို တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္သည္။ ၿပီး ေတာ့ အကႌ်လဲရန္ဘီရိုဆီသို႔ထ၍လာသည္။ “နီနီ … အ၀တ္လဲေနတာ ၾကာလွၿပီ …” အန္ကယ္၏ အသံကေရွ႕ခန္းမွ ေပၚလာသည္။ ၿပီးေျခနင္းသံကိုၾကားရသည္။ အန္ကယ္ဆိုတာက နီနီပေထြး … အသက္က သံုးဆယ္ ေလာက္သာရွိေသးသည္။ နီနီ ေမေမက ေလးဆယ္ ထဲေရာက္ေနၿပီး သူမ၏ေယာကၤ်ား နီနီ၏ပေထြး ကိုတင့္ေအာင္ကို နီနီ အန္ကယ္ဟုေခၚရန္ေမေမက သင္ထားသည္။ နီနီ၏ အသက္က ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ ထဲေရာက္ေနေခ်ၿပီ။ ေမေမႏွင့္ကိုတင္ေအာင္တို႔ယူလိုက္ၾကသည္က ဘာမွ်မၾကာေသး ေလးငါးလေလာက္သာရွိ ေသးသည္။ ေဖေဖဆံုးသြားသည္က ငါးႏွစ္မွ်ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ေမေမေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မည္ဆိုေတာ့ အသက္ ေလးဆယ္ထဲ ေရာက္ေနေပမဲ့ ႏုပ်ိဳဆဲလွပဆဲ ေမေမ့ကို နီနီ အရမ္းသေမွ်ာသည္။ မ်က္ရည္လည္ရြဲႏွင့္ […]
ယေန႔ခ်ိန္ထိ ႏုပ်ိဳလွပကာ ပရိသတ္ေတြ ခ်စ္မဝ ျဖစ္ေနသူကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာေလး နႏၵာလႈိင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သမီးေလးေတြအတြက္ မိခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေနထိုင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြကလည္း ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သူမရဲ႕ သမီးေလးသုံးေယာက္ကိုပါ ခ်စ္မဝ ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ နႏၵာဟာ မိသားစုအေပၚမွာလည္း တာဝန္ေက်ပြန္လြန္းတဲ့ သမီးအလိမၼာေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ေမြးခ်င္းေျခာက္ေယာက္ထဲတြင္ ဒုတိယေျမာက္ သမီးေခ်ာေလး ျဖစ္ပါတယ္။ နႏၵာရဲ႕ မိသားစုေလးကလည္း စည္းစည္းလုံးလုံးရွိလွၿပီး ျမင္ရသူတိုင္း ၾကည္ႏူးအားက်ေစတာလည္း အေသခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔ညကလည္း နႏၵာရဲ႕ ခင္ပြန္း ေဇသီဟရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာ ပုံေလးတစ္ပုံ တင္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ညီမေလးေတြကို အမႀကီးအမိရာဆိုတဲ့အတိုင္း ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တဲ့ ပုံေလးပဲ […]
Categorized as အင်းဆက် Tagged အစ်မကိုမညှာနဲ့
လိပ်ပြာ တို့ရဲ့ သံစဉ်